कहिले काटियो पृथ्वीजयन्तीको बिदा ? Weekly Nepal
कहिले काटियो पृथ्वीजयन्तीको बिदा ?
काठमाडौं, २७ पुस । ०६२/ ६३ को जनआन्दोलनलगत्तै गठन भएको सरकारले २७ पुसमा मनाइने गरेको पृथ्वीजयन्तीलाई सार्वजनिक बिदाको सूचीबाट हटायो । त्यसयता दश वर्ष सरकारले बिदा दिएको छैन ।
सबै जातको फूलवारी हो भन्छ तिमी पृथ्वी,तीमी मोरेर गएको २४०-५० वर्षको अवधिमा तिम्रै खलक आर्य क्षेत्रीबाहुनले मात्रै देशको सम्पूर्ण सम्पति आफैमात्र घिचेर अरू जातलाई मारेकै मारे छ र देश १००% टुक्रिने संघारमा छ,भुत्रोको नेपाल सबै जातको फूलवारी हुने । तिमी अहिले हावामा भुत भएर हिडी रहेछाै,तिमी तिम्रो खलकको आत्मा भित्र छिरी ऐ बजिया हो आफै मात्र नघिच अरू जातलाई पनि देऊ मैले सबैको फूलवारी भनेको खोई भन्नु नि।